Diyo post :: खेलकुद क्षेत्र ‘पकेटवाला’ ग्रुपहरुको कब्जामा छ: धुर्व विक्रम मल्ल खेलकुद क्षेत्र ‘पकेटवाला’ ग्रुपहरुको कब्जामा छ: धुर्व विक्रम मल्ल - Diyo post
खेलकुद क्षेत्र ‘पकेटवाला’ ग्रुपहरुको कब्जामा छ: धुर्व विक्रम मल्ल
खेलकुद क्षेत्रमा धुर्व विक्रम मल्ल त्यस्तो नाम हो, जसले राज्यलाई बोलीले होईन कामहरुले चुनौति दिन्छ । राज्यले करोडौं लगानी गरेर खेलाडी विदेशपठाउँदा मल्लले आफ्नो मोटर साईकल धरौटी राखेर आफ्नो विदेश पठाए । ‘स्टेट फन्डेड खेलाडीले शुन्य पदक ल्याउँदा उनको प्रशिक्षणमा हुर्केका खेलाडीले राज्यको ईज्जत जोगाईदियो । उनै मल्लले खेल क्षेत्रमा माओवादी भित्र्याए । बालाजु कराँते–डोजोका अध्यक्ष रहेका मल्लले खेलमा राजनीति, माओवादी प्रवेश र खेलकुदका विकृतिबारे दियोपोस्टसँग यस्तो अनुभव सुनाए ।
खेलकुदमा माओवादी छिरेको समय
जतिबेला माओवादी जनयुद्धको तिब्र बेग थियो । त्यहि बेगमा हामीले खेलकुद संगठन बनाएका थियौं । खेलकुदमा माओवादी भित्र्याउने व्यक्ति म नै हुँ भन्दा अन्यथा नहोला । गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघ हामीले बनाएका थियौं । खेलकुदका हस्तिहस्तिहरु, खेलकुदमै पिएचडी गर्ने प्रकाश प्रधान, खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय फस्ट पदक विजेता म्याराथुन दाहाल, जितबहादुर केसीलाई समेटेर हामीले गणतान्त्रीक खेलकुद महासंघ स्थापना गरेका थियौं । महासंघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नै छायाँमा पार्ने गरी कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।
माओवादीलाई खेलकुद क्षेत्रमा ल्याउने योजना मैले बनाएको थिएँ । किनभने १० वर्षसम्म युद्ध लडेको माओवादीले खुला राजनीतिमा आएपछि धेरै कुरा गर्ने सपना बाँढेको थियो । खेल क्षेत्रले पनि माओवादीबाट धेरै आसा गरेको थियो । परिवर्तनको आशाको केन्द्रविन्दु माओवादी थियो । त्यतिबेला ईन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्त हुनुहुन्थ्यो । संस्थापक अध्यक्ष म हुँ । त्यसपछि मेरै योजना अनुसार पिएलए स्पोर्टस क्लब बनाउँने कुरा भयो । माओवादी सेनाको सात शिविरमा हामीले काम शुरु गर्‍यौं । ७ वटै डिभिजनमा गएर मैले प्रशिक्षण दिएँ । अन्य गुरुहरुलाई डिभिजनमा कोचको रुपमा पठाएँ ।
२०६४ सालमा महासंघले गरेको राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सवमा ७५ वटै जिल्लाका खेलाडी सहभागी बनेका थिए । त्यतिबेलै माओवादीको खेलकुद भनेर चर्चा भएको थियो । त्यसपछि नै अन्य पार्टीले पनि खेलकुद संगठन बनाउन थालेका हुन् ।
जनसेनाको शिविर रहेको चौथो डिभिजन शक्त्तीखोरमा खेलकुद महोत्सव भयो । एक महिनादेखिको प्रयासले त्यो महोत्सव निकै सफल भयो । त्यही महोत्सवबाट माओवादी सेनाबाट खेलाडी बाहिर निकाल्ने उपायको रुपमा पिएलए स्पोर्टस क्लवको अवधारणा ल्यायौं । संस्थागत रुपमा २०६५ सालमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता गर्‍यौं ।
धुर्व विक्रम मल्ल अाफ्नाे कला देखाउँदै
दर्ता गर्ने समयमा पनि हामीले दुख झेल्नु पर्‍यो । खेलकुद मन्त्रालयले स्विकृती दिनुपर्थ्यो । परिषदबाट सिफारिस लिनुपथ्र्यो । मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समयमा सिफरिस लिनुपथ्र्यो । अहिलेका प्रधानमन्त्री ज्यु, तत्कालीन पिएलए क्लबका अध्यक्ष त्यसको समन्वयमा जानु भयो । हाल नेपाली सेनाका कर्णेल यमबहादुर अधिकारी पनिसँगै हुनुहुन्थ्यो । दर्ता भएपछि राज्य पक्षबाट पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद भयो । पिएलए क्लबको सहभागीता निकै गाह्रो थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए । दर्ता भईसकेपछि आधिकारिक रुपमा हामीले भाग लिन पाउथ्यौं । एउटा विभागिय टिमको नाताले । त्योबेला ४ वटा खेलमा सहभागीता जनाउँदा हामीले पाँच पदक जित्यौँ । हामी सहभागी भएपछि सेनाले खेल बहिस्कार गर्‍यो । तर, नेपाली सेनाले बुझेनकी खेलमा जात, धर्म, धनि गरिब र राजनीति हुँदैन भनेर । खेल भनेको भाईचारा बढाउने र सम्बन्ध बढाउने हो । त्यतिबेला सेनाले खेलमा राजनीति भित्र्याएको हो । खेलकुद भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सम्बन्ध बढाउने माध्यम हो । त्यस्तोमा उहाँहरुले झन सहमती र खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने थियो । युद्धमा चाहीँ आमनेसामने भएर लड्ने खेलमा चाहीँ भाग्ने ? सेनाले त्यतिबेला माओवादीसँग खेलमा भाग नलिएर हार स्विकार गरेको थियो ।
पछि छैटौ राष्ट्रिय खेलकुद भयो । हामीले भाग लियौं । ९ वटा टिममा चौथो नम्बरमा आयो पिएलए स्पोर्टस क्लब । १८ वटा गोल्डमेडल जित्यो । छैटौंमा सेनाले बहिस्कार गर्न सकेन । यसरी जनसेना भित्र भएका प्रतिभाहरु हामीले बाहिर ल्याउने काम ग¥यौं । र यस्ता खेलाडीहरु जन्मिए ।
पिएलए क्लबबाट उत्पादन भएका प्रतिभाहरु धेरै थिए । नाम लिने हो भने मिरा राई दोस्रो डिभिजनकी खेलाडी हुन् । जो अहिले विश्वको चर्चित खेलाडीमा पर्छिन् । ८० किलोमिटर अल टाईमर म्याराथुनमा विश्व च्याम्पियन भएर र ११० किलोमिटरको अल टाईमर म्याराथुुनमा ३ पटक सम्मको विश्व विजेतालाई पराजित गरेकी मिरा विश्वकै अल ओभरमा श्रेणी २ मा पर्छिन् । मिराको बारेमा बीबीसीले २८ दिनसम्म नेपालमा बसेर बृत चित्र तयार पारेको छ । २०१७ मा रिलीज हुँदैछ । त्यस्तै विश्वको चर्चित र शक्तिशाली देश चाईनाले पनि एक हप्ता उतै लगेर डकुमेन्ट्री तयार पारेको छ । त्यस्तै ईटालीले उसको बृतचित्र तयार गरिसकेको छ । भर्खरै बेलायतमा भएको ३७ किलोमिटर दौडमा खुट्टामा समस्या भएपछि उपचार भइरहेको छ ।
मिरा राई जनसेनामा अयोग्य ठहर्‍याइएको थियो । उनी १० हजार रुपैयाँ लिएर निस्केकी थिईन् । भोजपुर(मिराको घर)बाट उनी राजधानी आएकी थिईन् । म गुरु भएकाले मेरोमा एथ्लेटिक र कबर्डि खेल्र्थीन् । एक दिन उनी साथी मार्फत मलेसिया रोजगारीको लागिीजाने भनेर भिसा लाएर आईसकेको रहेछ । ‘म म मलेसिया रोजगारीको लागी जाँदैछु । मलाई खेल्ने रहर छ तर, घरमा स्थिती नाजुक छ ’ उनले यसो भनेपछि मेरो मन पोल्यो । यस्तो प्रतिभालाई पलायन हुन नदिनको लागि मैले प्रयत्न गरेँ ।
मिरा रार्इ जसले मलेसिया भिसा त्यागेर खेल जीवनमा फर्किइन्
मल्लकाे प्रशिक्षणमा हुर्केकी मिरा रार्इ
मिरा राई जनसेनामा अयोग्य ठहर्‍याइएको थियो । उनी १० हजार रुपैयाँ लिएर निस्केकी थिईन् । भोजपुर(मिराको घर)बाट उनी राजधानी आएकी थिईन् । उनी जनसेनामै हुँदा एथ्लेटिक, फूटबल र कराते खेल्थीन् । एक दिन उनी साथी मार्फत मलेसिया रोजगारीको लागि जाने भनेर भिसा लाएर आइसकेकी रहिछन् । ‘म मलेसिया रोजगारीको लागी जाँदैछु । मलाई खेल्ने रहर छ तर, घरमा स्थिती नाजुक छ ’ उनले यसो भनेपछि मेरो मन पोल्यो । यस्तो प्रतिभालाई पलायन हुन नदिनको लागि मैले प्रयत्न गरेँ । उसको बस्न, खान, तालीम गर्न समस्या थियो । त्यो सबै सुविधा मैले उपलब्ध गराईदिए । करातेको पनि उ ब्ल्याक बेल्ट हो । कराँतेमा स्पीड चाहिन्छ । त्यो स्पिड मिरासँग थिएन । तर थाक्दै नथाक्ने नेचर थियो । नथाक्ने मान्छेको लागि दौड ठीक हुन्छ भनेर मैले नै छानेको हुँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एथ्लेटिकको प्रमुख प्रशिक्षक सुशील नरसिंह राणालाई भेटाएर तालिन लिन लगाएँ । नेशनल टिमसंगै राखेर दुई तिन हप्ताको प्रशिक्षण पछि एउटा म्याराथुन प्रतियोगिता भयो । त्यसमा पाँचौ भइन् । त्यसपछि बालाजुको रानीवन स्थित फूलबारीबाट शुरु भएको अल्ट्रा म्याराथुनमा उनले स्वर्ण पदक जितिन् । पहिलो अल्टा सुरुमै म्याराथुनमै स्पर्ण पदक जितेपछि अब उसले केही गर्छ भन्ने विश्वासबढ्यो । अनी रिजल्ट पनि फटाफट आउन थाल्यो । मिरा राई जस्तो विश्वमा नेपाल भनेर चिनाउने र जनसेनाको खेलाडी भनेर चिनाउने व्यक्ति हुन् ।
विमला तामाङ पिएलए क्लबकी गर्व
छैठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पिएलए स्पोर्टस क्लबबाट कराते विधाको एकल कातामा स्वर्ण पदक जितेकी बिमला तामाङ मेरै उत्पादन हो । कोरियामा सम्पन्न १७ अाैं एशियन गेममा २०५ जना खेलाडीहरु सहभागी थिए । त्यो भित्र राज्यको लगानी बिना सहभागी हुने विमला तामाङ थिईन् । जसलाई मैले नै खर्च गरेको थिएँ । तर, राज्यको लगानी बालुवामा पानी भयो । एउटै मात्र राज्यको लागी कास्य पदक विजेता विमला तामाङ बनिन् । सन् २०१४ को त्यो सबैभन्दा ठूलो रिजल्ट थियो । सन् २०१५ मा मिरा राईले नेपालको ईज्जत राखिन् । उनीहरुमा राज्यको १०० रुपैयाँ पनि लगानी थिएन । मसँग धेरै ठूला रिजल्ट दिने खेलाडीहरु छन् । राज्यले जति लगानी र हल्ला गरेपनि चाहिने भनेको पदक हो । सन् २०१६ मा हुने साउथ एशियन कराते गेम्समा १० वटा स्वर्ण ल्याउने तयारीमा छु ।
अनुपमा मगर दोस्रो डिभिजनको खेलाडी हो । बच्चादेखि नै जनसेनामा लागेर उसले स्वयच्छिक अवकास लिएकी थिइन् । उ साउथ एशियाको गोल्ड मेडलिस्ट हो । भने १७ औ एशियन गेम्स २०१४ कोरियामा पाच नम्बरको उपाधि पाएको थिइन् ।
यहाँ यस्तो ‘पकेटवाला’ ग्रुपहरु छन् । जसलाई खलको भित्रि नियम थाहा छैन तर, उ सबै खेलकुद मेरो हो भन्छ । राज्य आफैले पनि कोसँग के क्षमता छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेन । आफ्ना मान्छेहरु खोज्न थाल्यो । सम्बन्धीत विषयमा विज्ञता हासिल गरेका प्रशिक्षकहरुले ढोका ढक्ढक्याउँन जाँदैन । जोसँग सिप र क्षमता छैन उ गुलामी गर्न जान्छ ।
खेलकुद भनेको खेलाडीको लागि हो । रियो ओलम्पीकमा सात जना खेलाडी गए । ४१ जना पदाधिकारीले घुमघाम गरे । ती भनेको पर्यटक हो । त्यसको सिस्टम बनाउँन जरुरी छ ।
कसरी आउँछ पदक ?
म कराते विधामा पनि आफै अन्र्तराष्ट्रिय लाईसेन्स प्राप्त रेफ्री हुँ । मलाई सबै नियमहरु थाहा छ । एसियामा कुन देशको खेलाडी कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । त्यसकारण मेरा खेलाडीहरुलाई पदक ल्याउन कुनै समस्या छैन । खेल भनेको ट्रेनिङ मात्रै होईन । अवसर पनि हो । अवसर दिइयो भने नतिजा पनि आउँछ । सन् २०१६ मा म १० वटा स्वर्ण ल्याउँछु ।
राज्य किन सक्दैन ?
राज्यलाई टेक्निकल्ली धेरै कुरा थाहा छैन । बाहिर मिडियामा हल्ला गर्ने मात्रै हो । जबसम्म खेलाडीलाई वनवेय बनाउँन सकिँदैन तवसम्म मेडल आउँदैन । उसको काम नै खेल्ने र खेलसम्बन्धी पढ्ने हुनुपर्छ । लगानी जति बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । । जुडो,उसु,बक्सिङ्ग,कराँते, तेक्वान्दो लगाएत व्यक्तिगत जस्ता खेलहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पदक आउने संभावना छ ।
अब राज्यले यसो गरोस्
राज्यले हरेक खेलको एकेडेमि स्थापना गरोस् । सम्बन्धीत खेलको लाईसन्सवाला प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने काम गर्नुपर्छ । रेफ्री उत्पादन गर्नुप¥यो । खेलाडीहरुलाई त्यही अनुसार कम्पिटिसन गराई राख्नु पर्छ । मन्त्री र सदस्य सचिव आउँनासाथ आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने होडबाजी गर्छन् । कुन खेलमा मेरो मान्छे राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘बडी’काे रोबरमा चुनावको आधारमा बनेको संघलाई मात्रै अनुमति दिनुपर्छ ।
हरेक क्षेत्रमा विकृति छन् । खेलकुद पनि अछूतो छैन । यहाँ यस्तो ‘पकेटवाला’ ग्रुपहरु छन् । जसलाई खेलको भित्रि नियम थाहा छैन ।तर, उ सबै खेलकुद मेरो हो भन्छ । राज्य आफैले पनि कोसँग के क्षमता छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेन । आफ्ना मान्छेहरु खोज्न थाल्यो । सम्बन्धीत विषयमा विज्ञता हासिल गरेका प्रशिक्षकहरुले ढोका ढक्ढक्याउँन जाँदैन । जोसँग सिप र क्षमता छैन उ गुलामी गर्न जान्छ ।
खेलकुदमा माओवादी अस्तित्व सकियो
माओवादीकै नेतृत्वले चार पाँच बर्ष खेलकुद चलाएको छ । तर, उसले पनि खेलकुद बुझ्न सकेन । चार वर्षमा नतिजा के आयो ? ओलम्पीक कमिटिमा को छ ? खेलकुद परिषदमा को छ ? चार वर्षको ईतिहासले खेलकुद क्षेत्रमा माओवादीको अस्तित्व संकटमा परेको देखियो । यहि चार वर्ष भित्र राज्यको लगानी विहिन खेलाडीले राज्यको लागि पदक जित्यो । राज्यले अयोग्य घोषणा गरेको व्यक्तिले विश्वमा चर्चा कमायो । अनुपमा मगर दोस्रो डिभिजनको खेलाडी हो । बच्चादेखि नै जनसेनामा लागेर उसले स्वयच्छिक अवकास लिएको लिएकी थिइन् । उ साउथ एशियाको गोल्ड मेडलिस्ट हो । मिरा राई, विमला तामाङहरुलाई माओवादी नेतृत्वले नै छायाँमा पार्ने काम गर्‍यो ।
खेलकुद मन्त्रीलाई सुझाव
खेलकुद मन्त्रालय अहिले माओवादीको हातमा छ । खेलाडीले पदक जितुन्जेल उसको वाह्…वाह.. हुन्छ तर, त्यसपछिको भविष्य के ? रोजिरोटीकै समस्याका कारण खेलाडीहरु पलायन भइरहेको डरलाग्दो परिस्थिति छ । साफ, एसियन गेम्समा मेडलिस्ट र ओलम्पिकमा राम्रो खेल प्रदशन गर्ने जेहेन्दार करेन्ट खेलाडीहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराउँनु पर्छ । त्यो भत्ताले घर परिवार र उ स्वयमं पालियोस् । खेलेरै बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउँनुपर्छ । पुरानो ओलम्पियन सहभागी जनाई सकेको एशियन गेमहरुमा पदक बिजेता र साफ गेम्समा स्वर्ण पदक जितेकाहरुलाई सम्मान स्वरुप उत्साहित राख्न सक्नु पर्छ । विश्व खेल विधाको नीति नियम अनुसार प्रशिक्षक गुरुहरुलाई सेमिनार, तालिममा अबसरको बाताबरण बनाई राखी अनुभवि प्रशिक्षकको भूमिकामा राख्नुपर्छ । राज्यले खेलाडी किन पलायन भयो भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्छ l सरकारले चाहने हो भने एउटा क्याबिनेट निर्णयको आधारमा खेलाडीको भविष्य बन्नेछ। त्यसाे भयाे भने आत्मबल बढ्नुका साथै राष्ट्रप्रतिको भावना बढेर जान्छ ।